SomaliTalk.com » 2010 » February » 26
Home » Archive Maalinta February 26th, 2010
Dr Faroole oo Xilkii ka xayuubiyey Guddoomiyihii Gobolka Bari iyo Duqa magaalada Boosaaso
Waxaana la kala diray Golahii Degaanka Magaalada Boosaaso… Laba wareegto oo uu soo saaray Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Puntland, Dr.Cabdiraxman Maxamad Maxmud ( Farole), ayaa lagu kala dirid golaha degaanka Magaalada Bosaso, isla markaasna waxaa uu magacaabay Guddoomiye cusub ee Gobolka Bari iyo Duqa Magaalada Boosaaso. Wareegta koowaad waxay u qornayd sidan Xeer Madaxweyne Lr. 17 25/02/2010...
Halkudheg: faroole, Puntland
“Afhayeenka” Budhcad Badeedka Somaliyed Oo Sheegay In Lamanaha Britishka Ay Ku Bedelan Doonaan Kuwa Laga Haysto
“Afhayeenka” budhcad badeedka soomaaliyeed oo shir jaraa,id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa shaaca ka qaaday inaysan sii deyn doonin lamaanaha ingiriiska ah ee ay haystaan islamrkaana ku andacooday in laga haysto boqolaal ka tirsan budhcadooda . Khaliif Idiris Cismaan oo sheegay inuu yahay afhayeenka Budhcad badeedka oo la hadlayey saxaafada ayaa shaaca ka qaaday inaysan ahayn Budhcad...
Dowlada Spain oo hormuud ka noqoneysa howlgalada ciidamda DFKMG tababar logu siinayo dalka Ugaandha
saraakiil sar sare oo ka socdo Wasaarada Gashandhiga Spain ayaa sheegay in ay hormuud ka noqonayaan howlgalka ciidamada DKMG Somalia loogu tababa rayo wadanka Uganda. Wasaarada Gashandhiga Spain ayaa sheegtay in ay hormuud ka noqoneyso howlgalka ciidamada DKMG Somalia loogu tababa rayo wadanka Uganda. Wasiirka gaashaandhiga ee wadanka Spain Carme Chacon oo warfidiyeenada kula hadashay magaalada...